हेलम्बु सरकारको बजेट चैत मसान्तमै फरफारक
नयाँ पत्रिका समाचार प्रभाव : विपन्नलाई दाहसंस्कारमा शुल्क नलिने पशुपति क्षेत्र विकास कोषको निर्णय
कोरोना संक्रमितको उपचार व्यवस्था मिलाउन निजी अस्पताललाई सर्वाेच्चको आदेश
एकै वर्ष १२ करोड ४० लाखको भन्सार छुट लिने झापाको बिएन्डसी अस्पतालले झाडा पखाला लागेका बालकलाई गेटबाट फर्काइदियो
घरमा आफै यसरी बनाउनुहोस ‘सेनिटाइजर’
अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस : उचाइ लिँदै महिला आन्दोलन
छ महिला, जसले ‘होम स्टे’लाई सामुदायिक व्यवसाय बनाए
महिला आन्दोलनले खोजेको स्पष्टता
प्रहरीलाई छल्दै बालविवाह
देउडा लयमा गणितका सूत्र
भट्ट बनिन् सुदूरपश्चिमकी पहिलो डोजर चालक
स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले लक्ष्यअनुसार, बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । अब कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि वैशाखदेखि असार मसान्तसम्म बजेट खर्च गर्न रात–दिन खट्नेछन् । तर, सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई भने चैत सकिएसँगै हाइसन्चो भएको छ । उनीहरू नयाँ वर्ष लागेसँगै फुर्सदिला भएका छन् । चालू आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेटअनुसारका सबै योजना चैत मसान्तभित्रै सम्पन्न गरेका छन् ।
‘योजनाको काम पनि सकियो, बजेट पनि सकियो,’ हेलम्बुका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले भने ।
हेलम्बु सरकारले गत असारमा दोस्रो साता बजेट ल्याएको थियो । १० असारमा बसेको तेस्रो गाउँसभाले नीति कार्यक्रम तथा बजेट पारित गरेको थियो । गाउँसभाले बजेट पारित गरेसँगै योजनाको ठेक्का सम्झौता गर्न आह्वान गरेको थियो । ‘तत्काल योजना कार्यान्वयमा लग्ने नीतिअनुरूप सम्झौता गरेका थियौँ,’ अध्यक्ष शेर्पाले भने ।
यसका लागि हेलम्बु सरकारले आर्थिक ऐन बनाएर योजना सम्झौता गर्ने समयसीमा तोकेको थियो । त्यसपछि सम्झौतामै भदौ–असोजमा योजना कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । उपभोक्ता समितिसँग पनि असोजभित्रै कार्यान्वयन तहमा जानुपर्ने सम्झौता गरेको अध्यक्ष शेर्पाले बताए । ‘योजना सम्झौता गर्दा नै चैत मसान्तभित्र काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने समयसीमा तोेकेका थियौैँ । त्यहीअनुसार सबैले काम सम्पन्न गरेका छन्,’ उनले भने ।
चैतमै योजनाहरू फरफारक भएपछि कर्मचारी र जनप्रतिनिधि फुर्सदिला भएको उनले बताए । यहाँ ३७ जनप्रतिनिधि र २० कर्मचारी कार्यरत छन् । गाउँपालिकाका अनुसार सबै योजना सम्पन्न भएका छन् । केही छुटफुट योजनाको मात्रै भुक्तानी बाँकी छ । हेलम्बुले चालू आर्थिक वर्षका ३८ करोड २९ लाख ५३ हजारको बजेट ल्याएको थियो ।
हेलम्बु सरकारले आफ्नो बजेटअन्तर्गका योजना सम्पन्न गरेपछि संघ र प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको योजनाको भने काम हुँदै छ । संघले र प्रदेशले बजेट पठाउन ढिला गरेकाले काम भइरहेको अध्यक्ष शेर्पाले बताए । केन्द्रले समपूरक र विशेष बजेट शीर्षकमा अर्थ मन्त्रालयबाट विनियोजित चार करोड ५१ लाख विनियोजन गरेको थियो । त्यस्तै, प्रदेश ३ सरकारले विशेष बजेटअन्तर्गत एक करोड विनियोजन गरेको छ । ती योजना कार्यान्वयन भइरहेका छन् । समपूरक र विशेष बजेटअन्तर्गत एउटा नमुना विद्यालय, पाँचवटा सडक, दुईवटा वडा कार्यालय भवन र सोलार बत्तीको काम अघि भइरहेको ।
त्यसका लागि जिल्ला समन्वय समितिले डिपीआरसहित बजेट माग गर्न यहाँका स्थानीय सरकारलाई पत्र पठाएको थियो । हेलम्बुले फागुनमै योजनाको डिपिआरसहित बजेट माग गरेको थियो । तर, सिन्धुपाल्चोकका अन्य ११ स्थानीय तहले भने समपूरक र विशेष बजेटका अझै पनि डिपिआरसहितको माग पेस नगरेको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ ।
गाउँपालिकामा वृद्धाश्रम खोल्न प्रतिबन्ध
हेलम्बु गाउँपालिकामा वृद्धाश्रम खोल्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । बरु गाउँपालिकाले नै ‘डे केयर सेन्टर’ सञ्चालन गरेको छ । हेलम्बु–५ मा सेन्टर सञ्चालन गरिएको हो । सबै वडा र टोलमा सेन्टर सञ्चालन गर्ने योजना रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष शेर्पाले बताए । जहाँ दिनभरि गाउँका ज्येष्ठ नागरिक आउने गरेका छन् । उनीहरू दिनभरि कुराकानी गरेर तथा टिभी हेरेर बस्ने गरेका छन् । गाउँपालिकाले नै दिउँसोको खाजाको व्यवस्था गरेको छ । आफैँ जान नसक्ने ज्येष्ठ नागरिकलाई गाउँपालिकाका कर्मचारीले नै बेलुका घरमा पु-याउने व्यवस्था गरिएको छ ।
अर्को वर्षका केही योजना पनि पूरा
निमा ग्याल्जेन शेर्पा, अध्यक्ष
हेलम्बुले चालू आर्थिक वर्षका योजना त सम्पन्न गरेको छ नै आगामी आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ बाट पनि एक करोडबराबरका योजनासमेत पूरा गरेको छ । आगामी वर्षको बजेटबाट स्रोतभर्ना हुने गरी काम गरेको अध्यक्ष शेर्पाले बताए । ‘यो वर्षको बजेटबाहेक थप एक करोडबराबरको योजना सम्पन्न भएको छ, ती योजनाको आगामी वर्षको बजेटबाट स्रोतभर्ना गर्छौँ,’ उनले भने ।
उफ् ! एयरपोर्टका दु:ख नि (फोटोफिचर)
मूल्यवृद्धि उच्च सबैभन्दा बढी पहाडमा
उद्योग खोल्न के के चाहियो ? सरकार दिन तयार छ : प्रम ओली
जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम : रसुवागढी र साञ्जेनको साधारण शेयर खुला
अनुदार र नियन्त्रणमुखी सोचबाट समृद्धि कसरी ?
पुँजीगत लाभकरको गणना विधिमा अन्योलता छ ? यसरी गणना हुन्छ लाभकर
विदेशमा चम्किँदै नेपाली ब्रान्ड
जुम्लाका शिक्षकले दोस्रो चौमासिकको तलब पाएनन्
सुन खरिदमा नयाँ नियम : १० किलोमाथि किन्‍न गभर्नरकाे स्वीकृति
बजेट कस्तो छ ? उद्योगी र विज्ञको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया
राष्ट्र बैंकले मोबाइल वालेटमार्फत् हुने भुक्तानीको सिमा बढायो
वीरगन्जबाट ४५ करोडको झिलिमिली बत्ती भित्रियो, सबैभन्दा धेरै चिनियाँ
अब सार्वजनिक यातायातमा स्मार्ट कार्ड
चीनको उदय र नयाँ विश्वव्यवस्थाका संकेत
लिबिया द्वन्द्वमा सैनिक म�...
लिबियामा पछिल्लो साता जारी द्वन्द्धब
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिष�...
सरकारले सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् ब
८ महिनामा २ लाख विदेशी पर्�...
गण्डकी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको ८ �
के हामीपछि इतिहासको अन्त्�...
अहिले दुईवटा असाध्यै ज्वलन्त प्रश्न �
२०७५ का डेब्यु हिरोइन...
नेपाली फिल्म क्षेत्रमा ०७५ सालमा झन्�
चीनको उदय र नयाँ विश्वव्यव...
एउटा प्राचीन चिनियाँ भनाइ छ– ‘जब परिव�
पर्यटन विकास गर्न सिलिगुड�...
नेपाल र भारतका पर्यटन व्यवसायीले दुई �
प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा �...
निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा सिफा
अर्थ /वाणिज्य (1,281)